tora yemahara apple iphone 11 kubva t-nhare, heino maitiro
Kuru Nhau & Ongororo Tora yemahara Apple iPhone 11 kubva T-Mobile, heino maitiro
T-Mobile iri kupa yemahara 64GB Apple iPhone 11 kune chero munhu anozadzisa zvido zvake. Iwe hauna kumbofunga kuti zvaive nyore kuwana mahara iPhone, handiti? Huye, izvo & apos; hazvina kuoma chero sekunge uine imwe foni iyo iwe & apos; yaunoda kuitengesera iyo iPhone 11.
Yakareba nyaya ipfupi, unogona kuwana iyo iPhone 11 64GB yemahara kana ukauya nenhamba yako kuT-Mobile kubva kune anokodzera mutakuri uye kumisikidza inokodzera chirongwa chezwi. Ipapo, iwe unofanirwa kutenga iyo iPhone 11 64GB pane yepamwedzi yekubhadhara chirongwa.
Chekupedzisira, iwe unofanirwa kushambadzira mune chimwe chinotevera chinokodzera michina mune yakanaka mamiriro: iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note 9, Google Pixel 4 XL kana Google Pixel 4.
Kana usingave neyako dzerunhare dzakanyorwa pamusoro apa haugone kuwana iyo iPhone 11 yemahara, asi iwe unogona achiri kukwira kusvika kumadhora mazana mashanu kana ukatengesa mune chimwe cheizvi zvishandiso zvinokodzera: iPhone 7, iPhone 7 Plus , iPhone 6s, iPhone 6s Plus, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy Note 8, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 3, LG G8 kana OnePlus 7 Pro.
Kana uchinge wasangana nezvose zvinotarisirwa, iwe & apos; uchagamuchira yekushambadzira-muchikwereti kuburikidza makumi maviri nemwedzi bhiri kiredhiti. Chibvumirano ichi chakanangana nevatengi vanonyatsokwanisa uye hazvi sanganisira mutero.
s10 pre yakaiswa screen mudziviriri
ipad 4 vs ipad pro
Asus anotanga kutengesa inokwanisika iPad inokwikwidza ine inowoneka khibhodi uye yakavakirwa-mukati stylus
Iko HAPANA QA Chikwata muAgile
Discord inowana Server Vhidhiyo yekutaura chimiro chakakodzera kudonhedza-mukati, kudonhedza hurukuro